Rayson Noutworven Frabic Gomsufacturer & Mutengesi
Rayson akagadzira PP Spunbond Asina manyorerwo imbamba, ss isina ruchimbo yemucheka, chirwere chisiri chakarukwa chimbambaira, isina yakarukwa matafura uye emahara mashizha uye okurima asina ruchimbo.
Rayson Asina Akarukwa Machira
Rayson akazvipira kusarukwa kwekusvitswa, kusimudzira uye kugadzirwa. Zvigadzirwa zvaro ndezvipi zvisina mwero none machira, ss isina madhaya emucheka, meltblown isina ruchimbo, pamuchena puchena uye spunlace isina ruchimbo.
Bhuruu ss isina ruchimbo shabhi 25GR wdc 175mm yemask
Izvibhuruu ss non yakarukwa machira inoshandiswa kune yekutanga denderedzwa remaski. Kazhinji ndeyekuti 25G ripiti yakafara 175mm. Iyo SS isina ruchimbo njanji yakapfava, inodzvinyirira uye inodzokorora mvura. Uye iyi yebhuruu ss isina ruchimbo tambo inogadzirwa neRayson inogona kuvimbisa mhando.
Professional Vagadziri veasina kurwadza tafura (roll) muChina
Asina yakarukwa sablaccoroth, zvakare inozivikanwa seTnt tafura yejasi, ndeyechinyorwa chakagadzirwa kubva padzori zvinhu. Nezvakanakira zveco-hushamwari, zviri nyore, kushandisa, uye zvisina kurwadziswa, uye hombe nezvimwe zvinhu zvina zvevakarukwa zvigadzirwa zvisina kurwiswa. roll, tnt tafura yemumhanyi, pre-yakatuka tafura yebhusafura roll uye isina kurwadza nzvimbo.
Nyoro / hydrophilic isina ruchimbo
SS isina ruchimbo rababi yakagadzirwa nekaviri bheji tekinoroji. Iwe unoita here lino the hydrophilic quabric tsanangudzo? Zvimwe zvezvinyorwa zvemazita eiyi sS isina ruchimbo ruchema, nyoro, hydrophic uye isina kukuvadza. Iyi mhando yeiyo hydrophilic machira inoshandiswa seyakawirwa yemukati yemask. Rayson inyanzvi yehunyanzvi hydrophilic is a getabric vagadziri, nemakore mazhinji echiitiko chakapfuma.
SS isina hombovhu rakarukwa rokureva kwechipatara mubhedha
SS isina mhezi-yakarukwa yemuchina yezvinyorwa zvemabhizimusi emubhedha echipatara emigodhi kugadzirwa, kwakagadzirirwa kushandiswa nemubhedha wekurera, mabhedha echipatara, uye mibhedha yechipatara, uye mibhedha yechipatara. Iyi mibhedha inoraswa, inogadzirwa nehurombo hwekurara mashiti, zvichireva kuti inopa iyo yekufungidzira asi inogadzirisa mhinduro kune kiriniki yese.
Rayson Asina Akaringana Kambani inotungamirwa isingatungamire njanji gadziri uye mutengesi muChina ine makore gumi nemashanu ekuziva mukugadzirwa kusiri-kwakarukwa uye r&D. Iyo yakakwana mhando manejimendi system uye yakapfuma yekugadzira ruzivo inogona kuve nechokwadi chakagadzikana uye yakanaka chigadzirwa mhando mhando
Timu yekutengesa ine makore gumi nemashanu eInternational Trade ruzivo inogona kupa hunyanzvi mabasa muChirungu, Spanish, Italian, uye chiArabic. Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kunzvimbo dzinopfuura makumi mana dzakatenderedza nyika.
Rayson ane 10 Yakatangira isina-mhepo yekugadzira tambo mitsara, iyo inogona kubereka matani zviuru zvitatu zvemachira asina kuchena mumhando dzakasiyana mumhando yemwedzi, ine huwandu hwepamusoro hwe40. Mhando dzechigadzirwa dzePP dzisina-dzakarukwa, SMS, LET-LELW FABracs, uye tsono yakamanikidzwa zvisingaite, uye spun lace isina ruchimbo.
Iyo yakareba-yakaringana yakaringana mitsara yekusagadzikana mune yekuchengetedza inovimbisa kugadzikana kwemitengo yechigadzirwa.
Foshan Rayson Asina Akarwadza Co, Ltd. Is sino-US Joint venture, yakatangwa muna 2007, iri mutaundi reFoshan Shishan High Nzvimbo yeanenge 80,000 mativi metres uye kushandisa vanopfuura mazana mana vanhu. Iyo kambani inokatyamadza mukugadzirwa kweiyo spunbond machira uye isina mwaka zvigadzirwa zvigadzirwa, neanopfuura makumi mapfumbamwe muzana ezvigadzirwa zvayo zvakatengeswa munyika dzinopfuura makumi matatu.
Foshan Rayson Asina Akarwadza Co, Ltd. Mugadziri akasarudzika muindasitiri isina mwaka wemvura ine makore echiitiko. Izvo zvakazvipira kusiri-kwakarukwa musimboti wekutsvagira, uye kugadzirwa uye kune gumi epfuma yekugadzira midziyo yekugadzira, ss isina kurumwa, SMS, meltle puch uye spunlace isina kurwiswa, ne Kugadzira uremu huwandu kubva kuZimbabweS kusvika ku150GS mukati 4.2m yakafara, ine huwandu hwegore negore rekugadzira rinopfuura makumi matatu ematani. Iyo kambani inokwanisa kuburitsa madhiri asina mwero emhando dzakasiyana siyana uye saizi, yakakodzera kushandiswa kwakawanda kwakasiyana.